पिटरले गर्दा हाईहाई, महेशलाई धारेहात ? « MNTVONLINE.COM
पिटरले गर्दा हाईहाई, महेशलाई धारेहात ?
अन्ततः अष्ट्रेलियामा विगत चार महिनाभन्दा लामो समयदेखि अड्किएका नेपालीहरु स्वदेश फर्कन पाउने भएका छन् । महँगो चार्टड फ्लाईट मार्फत उनीहरु नेपाल जाने मिति पनि दुई पटक परिवर्तन भएर बल्लतल्ल पहिलो फ्लाईट आगामी जुन २३ तारिख काठमाडौंको भूमिमा टेक्नेछ । हुनतः यसअघि पनि तीन तीन वटा फ्लाईट अष्ट्रेलिया नआएको होइन । तर, यी सबै फ्लाईट अष्ट्रेलियाको सरकारले काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावास मार्फत बुक गरेका कारण उसले नै भनेबमोजिम उड्यो, फर्कियो ।
सबैभन्दा अन्तिमको तेश्रो फ्लाईटमा भने केही चलखेलहरु भए जसका कारण अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरुले आक्रोश ओकले । हुन पनि छोराछोरीलाई भेट्न आएर यत्तै रोकिन बाध्य बनेका, यहाँ काम भिसा सकिएर तुरुन्तै फर्कनपर्ने अधिकारीहरु, पढाई सकिएर स्वदेश फर्कन चाहने विद्यार्थीहरु मात्र होइन, कुनै भवितव्यमा परेर आफन्तजन गुमाएका कारण अतिजरुरी भएर नेपाल जान खोज्नेहरु समेत रोकिए । नाका बन्द थियो, कुनै उपाय थिएन । तर, ११ जना उडे । ८ जना नेपालबाटै उच्चतहमा सोर्सफोर्स लगाएका तीन जना दूतावासले सिफारिश गरेका अरु हेरेको हेर्यै ।
अब केही दिन पछि उड्न लागेको नेपाल सरकारले पठाउन लागेको चार्टड फ्लाईटको कुरा गरौं । सुरुमा यो फ्लाईट १७ जुन २०२० मा गर्ने तय भएको थियो । दोश्रो फ्लाईट २२ जुनमा । तर, यो सम्भव भएन । सरकारी काम गर्ने पारा, उड्नुअघि सम्बन्धित देशबाट पीसीआर टेष्ट गराउनैपर्ने बाध्यता आदिका कारण समयमा नै केही गर्न नसकिएको होला भनेर सबैले चित्त बुझाए ।
त्यसपछि तोकियो भाडादर । भाडादर १६ सय १५ थियो । मैले सोचे, यसअघि अष्ट्रेलियाले चार्टड गर्दा त्यसको भाडा त १६ सय ५० अमेरिकी डलर थियो । अझ त्यसअघि अष्ट्रेलियन दूतावासले कतार एयरवेजको विमान बुक गर्दा २३ सयभन्दा बढी अमेरिकी डलर भाडा तोकेर उद्धार फ्लाईट गरेको थियो । ल है ३५ डलर सस्तो बनाएछन् भन्ने लाग्यो । त्यतिबेला अष्ट्रेलियाले भाडा समायोजन गर्दै चार्टड विमान नै परिवर्तन गर्दा दुई हात पर उफ्रेर नेपालीमूलका अष्ट्रेलियनहरुले वाउ पिटर, वेलडन पिटर भनेको नै सुनिएको थियो । सामाजिक सञ्जालभरि दूतावासका सूचनाहरु शेयर भएको पनि थाहा पाइएकै हो । यता अहिले १६ सय १५ अमेरिकी डलर भाडा तोक्दा भने नेपाली दूतलाई तथानाम गाली पो गरिरहेको भेटिन्छन् ।
पिटरले गर्दा वाउ अनि महेशले गर्दा धारेहात ? कस्तो दोहोरो मापदण्ड हो यो ? हामी नेपालीले सोच्न सक्ने भनेकै नकारात्मकता हो कि के हो ? हो, हिजो व्यवसायिक फ्लाईट हुँदा हामीले ७ सय डलरमा दुईतर्फी भाडा पनि पाएकै हो अफरको बेला । धेरै अगाडि टिकट काट्दा आठ नौ सयमा दुईतर्फी भाडामा जान पाउने कुरा पक्का जस्तै थियो । तर, अहिले सबैतिर बन्द छ । हिजो मात्रै पढेको अष्ट्रेलियाबाट अमेरिका जानेहरुले गुनासो गरेछन् चार्टड फ्लाईटको भाडा महँगो भयो भनेर । सकेसम्म सस्तो, सुविधाजनक खोज्ने यो क्रम त चलिरहन्छ नि । फेरि सरकारले त एनआरएनलाई नै पनि सस्तो भाडादरमा तिमी ल्याउन सक्छौ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं भनेको बेला गाली गलौजभन्दा पनि सहकार्य आवश्यक छ ।
प्रा.डा.युवराज संग्रौला विदेशमा केही केही नेपाली भन्ने शब्द जोडिएका विद्वानहरु, जो दुनियाँ आफूले मात्र जानेको
कोरोनाको कारण संसारभरीकै मानिसहरूको दिनचर्या तहस-नहस भएको कुरा त मैले भनिरहन पर्दैन, पत्रत्रिका,सामाजिक सञ्जाल र
बिहानको चार बजेको हुँदोहो, छिमेकीको कुखुरो कराएर बिउँझाइदियो । आज त शनिबार जे परेनी परोस
रेमिट्यान्स क्षेत्रमा कोरोनाको असर !
– महेश श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकले बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको